Mutsa unoita iwe uve munhu akanaka kwazvo munyika, zvisinei nekuti unoita sei. - Anotungamira - Quotes Pedia
Mutsa unoita kuti uve munhu akanaka kwazvo pasirese, zvisinei kuti unoratidzika sei. - Asingazivikanwe
Runako harurevi munzira yaunotarisa, asi zviri munzira yemaitiro aunoita nevamwe.
Mutsa unoita kuti uve munhu akanaka kwazvo pasi rino. Zvese iwe zvaunoda kutarisa pane kubata vamwe zvakanaka, nekuti ndizvo zvinorasirwa nevanhu vazhinji mazuvano.
Unogona kunge uine hupfumi hwakawanda, uye unogona kunge uri kutarisa mukadzi akanaka uye akanaka kana murume akanaka kwazvo pasi pano, asi hapana chiri kunyatsoita basa. Zvese zvakakosha inzira yaunozvibata nayo nevamwe.
Panzvimbo pokupfeka jira rinodhura zvakanyanya kana kuyedza kutaridzika nekupfeka yakawanda yekuzora, edza kutenda mumutsa uye zvakapusa, nekuti izvi ndizvo chete zvinhu zviviri zvicha sarudza nzira yaunotaridzika pamberi pevamwe.
Vanhu vanogona kukanganwa nezvekunaka kwauinako, asi kana iwe ukave une hunhu kwavari uye unetsitsi kubva pamoyo wako, ndizvo zvavanozoyeuka hupenyu hwavo hwese.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti vanhu havana hunyoro mazuva ano, uye kana uri wako, zvirokwazvo ndiwe unoshamisa kwazvo munhu pasi rino.
Iwe haufanire kutaridzika wakanaka kubva pakuonekwa kwako, asi kana uri munyoro pamoyo, hapana chinhu munyika ino chingamborova runako rwako.
Ziva izvozvo runako harutongwe nekutarisa kwaunoita kubva kunze, asi zvinoenderana nenzira yaunotarisa kubva mukati! Nekudaro, tarisa pakuve munhu anofarirwa nemunhu wese nekuda kwehunhu hwako uye hunhu, uye kwete kwete chete nekuda kwechimiro chako.
Mabasa Emutsa Quotes
Akanaka Quotes Kurarama Na
Sarudza Mutsa Quotes
Kukurudzira Mutsa Quotes
Mutsa Kukurudzira Quotes
Mutsa Kutora Nemashoko
Mutsa Quotes Kune Vana
Mutsa Unotora Mifananidzo
Hapana Chekuita Quotes
Quotes Pamusoro Pomutsa Uye Tsitsi
Quotes PaMutsa Uye Rupo
Mwari vanokuda zvakanyanya munguva pfupi kupfuura zvinoita chero munhu muhupenyu. - Asingazivikanwe
Izvo zvinotaurwa nenzira kwayo kuti hapana chinogona kutsiva kukosha kwemaropafadzo aMwari. Mwari anokuda zvakanyanya mu…
Mwari, Pandinenge ndichikuvadza, podzai kurwadziwa kwangu. Kana ndisina chokwadi newe, ndiratidze nzira. Ndizivise kuti simba rako ndiro simba rangu. Ndibatsireiwo kufamba nhasi murunyararo, kunzwisisa uye nerudo. - Asingazivikanwe
Mwari, Pandinenge ndichikuvadza, podzai kurwadziwa kwangu. Kana ndisina chokwadi newe, ndiratidze nzira. Rega ndi…
Mwari dzimwe nguva vanobvisa vanhu kubva muhupenyu hwako kukuchengetedza. Usamhanye shure kwavo. - Asingazivikanwe
Dzimwe nguva, iwe unosangana nevanhu vanokuda pakati nepakati. Zvakakosha kunzwisisa kuti Mwari…
Kutenda nemunamato zvese hazvioneke, asi zvinoita kuti zvinhu zvisingakwanisike zviitike. - Asingazivikanwe
Kutenda neminamato zvakakosha zvakanyanya muhupenyu hwemunhu. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti zvese kutenda uye…
Iwe haugone kusimba nguva dzose. Dzimwe nguva iwe unongoda kuve wega uye rega misodzi yako ibude. - Asingazivikanwe
Iwe haugone kusimba nguva dzose. Dzimwe nguva iwe unongoda kuve wega uye rega misodzi yako…